Nagu saabsan - Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd.
Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd., koodhka saamiga: 300453, waxaa la aasaasay 1997. Waa ganacsi farsamo heer qaran oo heer sare ah oo ku takhasusay qalabka caafimaadka R & D, wax soo saarka, iibka iyo adeegga.Ka dib markii in ka badan 20 sano oo uruur ah, shirkaddu waxay leedahay aragti caalami ah, oo si dhow ula socota horumarka qaranka istiraatiijiyad, si dhow ula socoshada baahiyaha caafimaad, ku tiirsanaanta nidaamka maaraynta tayada codka iyo qaangaadhnimada R&D iyo waxsoosaarka wax soo saarka, waxayna hoggaanka u qabatay warshadaha si ay uga gudbaan nidaamka maaraynta tayada ee CE iyo CMD iyo shahaadada wax soo saarka iyo oggolaanshaha suuq-geynta US FDA (510K). Si firfircoon hal-abuurnimo iyo raadinta heer sare ah, waxay hadda u sameysay shirkad liis gareysan oo ku jirta qaybta nadiifinta dhiigga ee maxalliga ah ee xalka silsiladda warshadaha oo dhan. Sidoo kale waa shirkaddii ugu horreysay iyo shirkadda kaliya ee ku qoran warshadaha qalabka caafimaadka ee Gobolka Jiangxi.
In ka badan 20 sano, Sanxin Medtec wuxuu si isdaba-joog ah u hagaajiyay qaab-dhismeedkeeda wax soosaarka wuxuuna si guul leh u beddelay ugana casriyeeyay aagagga faleebada ee soojireenka ah, isagoo noqday mid ka mid ah shirkadaha yar ee gudaha ka jira ee xal u heli kara dhammaan silsiladda warshadaha ee dhiig nadiifinta. Waxaan si wada jir ah u bixinay adeegyo ka badan 120 milyan oo jeer oo loogu talagalay adeegyada sifaynta iyo adeegyada tallaalka oo in ka badan 800 milyan oo jeer loogu talagalay xarunta xakamaynta cudurrada. Waxaan hadda haysannaa in kabadan 80 shahaadooyin patent ah, in kabadan 80 shahaadooyinka diiwaangelinta wax soo saarka waxaanan kaqeybqaadnay diyaarinta 10 heer qaran iyo warshadeed. Wax soo saarkayaga waxaa loo iibiyaa in ka badan 60 waddan iyo gobollada shirkadda waxay si firfircoon u sahamisaa qaab cusub oo ah horumarinta warshadaha waxayna sameysay qaab horumarineed oo heer qaran ah oo ku saleysan Jiangxi. Waxyaabaha ugu waaweyn ee ay soo saaraan waxay daboolayaan lix taxane ah oo dhiig nadiifin ah, tuubbooyin gudaha ku jira, irbado, dhiig ku shubis, qalliin wadnaha lagu sameeyo, iyo ilaalin.
Bukaanjiifka dhiig baxa
Dalalka iyo gobolada
Heerarka Qaranka / warshadaha
Aqoon isweydaarsi iswada
Tobannaankii sano ee la soo dhaafay, SANXIN waxay si firfircoon uga jawaabtay baahida suuqa ee wax soo saarka caqliga badan. Dhexgal khayraadka gudaha ee warshadaha iskuna darso tiknoolajiyada macluumaadka si loo abuuro xalal maarayn aqoon isweydaarsi. Inta lagu gudajiro soosaarka caqliga badan, wuxuu kaloo kuu keenayaa awooda lasocodka xogta waxsoosaarka waqtiga dhabta ah, isbeddelada waqtiga-dhabta ah, iyo ku haboonaanta la socodka waqtiga-dhabta ah, oo si tartiib tartiib ah u yareynaya faragelinta aadanaha, hagaajineysa tayada wax soo saarka iyo waqtiga gaarsiinta, isla markaana keenaya maareyn aad u haboon.